Smash Hit APK အားဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ခခြှေဲပြီးရင်တော့
ခခြှေဲ APK ကိုနှိပ်ပါ
တစ်ဦး otherworldly အတိုင်းအတာတဆင့်တစ်ဦးလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်ခရီးကိုယူသောအသံနှင့်ဂီတနဲ့အညီရွှေ့နှင့်သင့်လမ်းကြောင်းကိုအတွက်အရာအားလုံးတပ်များ! ဒီအတှေ့အကွုံမြားအဖြစ်ဝေးသင်လုပ်နိုင်သည်အဖြစ်ခရီးသွားလာ, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့လမ်းအတွက်မတ်တပ်ရပ်သောလှပသောဖန်တ္ထုကိုချိုးဖျက်ဖို့သာအာရုံ, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အချိန်ကိုက်လိုအပ်သည်။
* သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်အတားအဆီးနှင့်ပစ်မှတ်ရမ်းနှင့်မိုဘိုင်း Device များပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးပျက်စီးခြင်းကိုရူပဗေဒကြုံနေရတစ်လှပသောအနာဂတ်ရှုထောင်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းတပ်များ။
* ဂီတညှိဂိမ်း: ဂီတနှင့်အသံသက်ရောက်မှုတစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်ကိုက်ညီဖို့ပြောင်းလဲအတားအဆီးတစ်ခုစီကိုသစ်ကိုညှိဖို့ရွှေ့။
* 50 11 ကွဲပြားခြားနားသောဂရပ်ဖစ်စတိုင်များနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောအခန်းများနှင့်တိုင်းအဆင့်တွင်လက်တွေ့ဖန်-ခြိုးဖောကျ mechanics ရဲ့ကျော်။
ခခြှေဲပြီးရင်တော့ကြော်ငြာများမှမပါကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်မှာဖွင့ ်. ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးရွေးချယ်နိုင်ပရီမီယံအဆင့်မြှင့်ဂိမ်းအသစ်သည် Modes, မျိုးစုံကိရိယာအသေးစိတ်စာရင်းဇယားနှင့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကနေဆက်လက်နိုင်စွမ်းကိုဖြတ်ပြီးမှတပါးသောမိုဃ်းတိမ်ကို enable ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးတည်းအချိန် In-app ကိုဝယ်ယူမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
64 Compatibility ကိုကိုက်။ အမှားပြင်ဆင်ချက်များ။
78.00 ကို MB